Oxygen mask Vagadziri & Vatengesi - China Oxygen mask Factory
Nebulizer mask nemuromo chidimbu
Ruma firita mhando
Mask firita mhando
Muchina wekufema tupe
Nasal mask mhando
Trachea cannula mhando
Tracheotomy mask mhando
Ruma kuchengetedza mhando
Asiri-anodzosera oxygen mask
Nasal oksijeni cannula-yakapfava muromo
Kubatanidza chubhu ne yankauer mubato
Dzvinyiriro yekumanikidza bhegi
Stool manejimendi system
Yakavharwa suction catheter
Kubvisa liner A
Kubvisa liner B
Kubvisa liner D
Chitsiko Management System
Dzvinyiriro yekumisirwa Bhegi
Venturi Mask-2 Ruvara
Oxygen Mask inogadzirwa neerosol mask uye oksijeni tubing iyo inovhara muromo uye mhino uye yakasungirirwa kumusoro kune oxygen oxygen.Oxygen mask inoshandiswa kuendesa kufema mweya weoxygen kumapapu evarwere. Iyo okisijeni mask inoratidzira tambo dzakasununguka uye dzinogadziriswa mamhuno emhino iyo inogonesa yakanakira kukwana pane akasiyana siyana ehukuru hwemeso Oxygen Mask ine Tubing inouya ne 200cm oksijeni inopa tubing, uye iyo yakajeka uye yakapfava vinyl inopa huru murwere nyaradzo uye inobvumira kuongororwa kunoonekwa. Oxygen Mask ine Tubing inowanikwa mune girini kana yakajeka ruvara.
Oxygen Mask inogadzirwa neerosol mask uye oksijeni tubing iyo inovhara muromo nemhino uye yakasungirirwa kumusoro kune tangi reoksijeni. Oxygen mask inoshandiswa kuendesa kufema mweya weoksijeni kumapapu evarwere. Iyo okisijeni mask inoratidzira tambo dzakasununguka uye dzinogadziriswa mamhuno emhino iyo inogonesa yakanakira kukwana pane akasiyana siyana ehukuru hwemeso Oxygen Mask ine Tubing inouya ne 200cm oksijeni inopa tubing, uye iyo yakajeka uye yakapfava vinyl inopa huru murwere nyaradzo uye inobvumira kuongororwa kunoonekwa. Oxygen Mask ine Tubing inowanikwa mune girini kana yakajeka ruvara.
Iyo tracheostomy idiki kuvhura kuburikidza neganda riri mumutsipa wako mukati meiyo windpipe (trachea). Iyo diki epurasitiki chubhu, inonzi tracheostomy tube kana trach chubhu, inoiswa kuburikidza neiyi yekuvhura mune trachea kubatsira kuchengetedza iyo yekuvhurika yemhepo yakavhurika. Munhu anofema akananga kubudikidza neiyi chubhu, panzvimbo yekupfuura nemumuromo nemumhino.
Chiremba kurasa okisijeni chifukidzo nedura bhegi inoshandiswa kune varwere vanoda yakawanda oxygen, kunyatso shandisa okisijeni kune yakanyanya kusangana. Iyo Isiri-Yekudzosazve mask (NRB) anoshandiswa kune varwere vanoda huwandu hwakawanda hweoksijeni. Varwere vanotambura nekukuvara kunorwadza kana chirwere chemoyo chinodaidzira iyo NRB Iyo inoshandisa dura hombe rinozadza apo murwere ari kufema. Iyo mweya inomanikidzwa kuburikidza nemakomba madiki padivi remask. Makomba aya anovharirwa apo murwere ari kufema, nekudaro kudzivirira mhepo yekunze kuti isapinda. Murwere ari kufema oxygen yakachena. Kuyerera kweiyo NRB ndeye 10 kusvika 15 LPM.
Kero:C7-5, No. 1699, Huishan Road, Huishan hupfumi nzvimbo yekuvandudza, Wuxi, Jiangsu, China.
Mhomho: Fay 0086 18795658525
Mhomho: Lisa 0086 15152201591